Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ र ?
प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ र ?
२० असार २०७८, आईतवार १४:२१
काठमाडौँ, २० असार । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ र भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘१४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ? ७६(५) को व्याख्या यही हुन्छ ?’ ‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । (देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने) १४९ मा २/३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ’ उनले बहसका क्रममा भने ।